Erdogan oo Maraykanka ka codsaday inuu sawaariikh ka iibiyo dalkiisa - BBC News Somali
14 Sebtembar 2019
Image caption Erdogan iyo Trump
Madaxweynaha Turkiga, Racep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in uu madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, kala hadlay in dalkiisu ka iibsado Maraykanka sawaariikhda difaaca ee Patriot, inkasta oo Turkigu iibsaday gantaalaha S-400 ee Ruushka.
Waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Erdogan ku caddeeyey in uu heshiiskaa haloosiga ah si faahfaahsan ugala hadli doono Trump, marka uu New York u tago ka qayb galka shirka golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay.
"Codsi baan hore ugu diray, waxaanan ku idhi walow aanu boqol sawaariikhda S-400 ah iibsanayno, waxaanu idinkana gaar idiinka iibsan karnaa gantaalaha Patriot. Laakiin waxa kale oo aan u sheegay in aanu doonayno in shuruudaha aan ku xidhayno iibsiga gantaalahaasi aanay ka duwanaan shuruudda aanu ku iibsanay S-400, markaasuu iigu jawaabay ma kaa dhab baa? Ana waxaan ugu hal celiyey dabcan way naga go'antahay" ayuu yidhi Erdogan.
Waxaanu intaa ku daray oo yidhi "arintaa waan u sheegay golaha wasiirrada, markaa heshiiska aanu gelaynaa waa in qodobadiisu ay la mid ahaadaan ka aanu ku iibsanay S-400 oo ay ka mid yihiin in si wada jir ah aan u samayno, in amaah na la siiyo iyo in sidoo kale na la siiyo tas-hiilaad. Hadii ay intaasi suurto gasho waxaanu iibsan doonaa sawaariikh badan oo Patriot ah. markaas ayuu igu yidhi ma kaa go'antahay arintaasi, waxaanan ugu jawaabay haa dabcan waa iga dhab."
Kurdiyiinta Suuriya oo ka baxay fadhiisimo ay ku lahaayeen soohdinta Turkiga
Markii Turkigu sheegay in uu iibsanayo gantaalahaa Ruushku sameeyo, ayaa Maraykanku aad u dhaleeceeyey dalkaas oo ay ku wada jiraan gaashaan buurta NATO.
Washington ayaa laba bilood ka hor sheegtay in ay Turkiga u diidayso iibka diyaaradaha F-35 ee Maraykanku sameeyo oo la filayey inuu iibsado, waxaanay sheegtay in ay ka fiirsanayso cunoqabatayno ay ku soo rogto Turkiga.
Arintani waxay soo baxday iyada oo danaha labada dal isku seegan yihiin gobolka woqooyiga Suuriya, halkaas oo Maraykanku xulafaysi la yeeshay xoogagga Kurdiyiinta oo Turkiguna u aqoonsanyahay in ay yihiin "ururro argagixiso ah".
In kasta oo Ankara iyo Washington ku heshiiyeen in aaggaa loo sameeyo maamul lagana dhigo "meel milatariga ka caagan" ayaa ahdana waxa weli jira caqabado badan oo hor yaal, wxaanay arimahaasi kalifeen in wasiirka arimaha dibadda, Mevlut Cavusoglu, ku eedeeyo Washington in ay carqaladaynayo heshiiska oo "go'aamo afka baarkiisa ah" uun gaadhay.
Siday u shaqeeyaan gantaalah S-400 ee Turkiga, Maraykanku isku seegeen
Image caption Gantaalaha Patriot ee Maraykanku sameeyo